Momba anay - XuZhou Xinpaez Water Purification Equipment Co., Ltd.
Xinpaez: Manam-pahaizana manokana amin'ny fitsaboana rano hatramin'ny taona 2010 China Xinpaez fanadiovan-drano Co., Ltd. dia mpanamboatra malaza manokana amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana ary fivarotana lohan-dosy, fantson-drano, sivana rano, faritra sivana rano, ary kojakoja am-dakozia. Niorina tamin'ny taona 2010 izy ary misy renivohitra voasoratra anarana 6 tapitrisa yuan (RMB). Eo ambany fitarihan'ny talen'ny talenay, 'Andriamatoa. WenLian Qiao ', nahavita fahombiazana lehibe tamin'ity sehatra ity izahay. Ny fitarihany karismatika, ny fahalalana amin'ny antsipiriany ary ny antony manosika azy tsy tapaka dia nahafahantsika nametraka ny tenanay ho toy ny fikambanana azo itokisana an'ity sehatra ity.
Amin'izao fotoana izao dia manana andalana famokarana 10 izahay. Nahazo hery avy amin'ny ekipa matihanina mazoto izahay.
Ny orinasanay dia manana ekipa mahaleo tena QC (Quality Control), hanao fitsirihana santionany tsy tapaka sy tsy ara-dalàna izy ireo hiantohana ny kalitaon'ny tsipika famokarana, hanala ireo ahiahin'ireo mpanjifa. Ny manam-pahaizana manokana dia mampiasa ny teknolojia fanangonana rano farany sy fanasiana rano amin'ny rano faran'izay tsara. Izy ireo dia miara-miasa miaraka amin'ny tsirairay mba hahomby amin'ny fanatanterahana ireo tanjona kendrena.
Ny varotra sy ny serivisy serivisinay dia miparitaka manerana ny firenena, ny firenena manondrana lehibe indrindra dia i Alemana, Korea atsimo, Italia, India, Russia, Australia, Indonesia, sns. Ireo orinasa lehibe iarahanay miasa dia: RongShiDa, ZhiGao, Angel, Midea, sns. soatoavina fototra amin'ny orinasa dia "Mifantoka amin'ny kalitao fa tsy habetsahana, mamokatra amin'ny fo". Manantena izahay fa hanome serivisy mahafa-po anao amin'ny asa mafy ataonay. Azonao atao ny miantso ny orinasanay amin'ny fotoana rehetra raha mahita olana ianao amin'ny fampiasana ny vokatray. Izahay dia hiatrika ny olana aorian'ny fivarotana mba ho afa-po ianao. Mba hamelana anao hividy mora, Xuzhou Xinpaez dia mampanantena izao manaraka izao: kalitao avo lenta, vidiny ambany, fandefasana haingana, serivisy varotra tsara indrindra.
Tao Xinpaez, izahay no benchmark amin'ny fitsaboana rano any Shina. Nandritra ny taona maro dia nahazo traikefa betsaka tamin'ity sehatra ity izahay. Miantehitra amin'ny ekipa manam-pahaizana voamarina izahay. Na inona na inona ilainao dia ho hainay aseho anao ny vahaolana tsara indrindra hahazoana rano madio.
Vokatra ambony kalitao ihany no atolotray. Ny tanjonay dia ny hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifanay. Manana fitaovana mandroso, haitao matihanina, raika siantifika ary fitantanana kalitao famokarana henjana izahay. Hahafantatra ny filanao ara-potoana izahay, ary hanao ny vokatra isan-karazany arakaraka ny filanao.
Ireo manam-pahaizana notendrenay dia manana fahalalana antsipirihany sy traikefa amin'ny fiasana amin'ny fikarakarana rano. Noho ny asa mahomby nataon'ny matihanina dia afaka nijoro nialoha ny mpifaninana taminay izahay. Ankoatr'izay dia mpamatsy volamena PLUS voamarina avy amin'ny SGS izahay. Ny sivan-drano sy ny cartridges rehetra azontsika dia nahazo ROHS, REACH ary mari-pankasitrahana hafa.